Indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela - I-Airbnb
Indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Clarizza
U-Clarizza Ungumbungazi ovelele
Uhlukaniswe nendlu eyinhloko - i- casita yesimanje enendawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela, igumbi lokugezela langasese, kanye nekhabethe lezinyawo elinikezelwe izindawo zokuhlala zezivakashi.
I-Casita yethu itholakala e-Gilbert, e-Arizona. Imigwaqo emikhulu yi-Higley ne-Komani Creek Road. Kutholakala amamayela angu-6 ukusuka e-Mesa Gateway Airport, futhi amamayela angu-28 ukusuka e-Sky Harbor Airport. Sisondelene ne-SanTan Village Mall, izindawo zokuthenga kanye nezindawo zokuheha. Indawo yangakithi isemphakathini obiyelwe.
I- casita ihlukanisiwe nendlu eyinhloko, ihlukaniswe negceke. Inendawo yayo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela egcekeni elinendawo yokungena yekhiphedi, ngakho izivakashi zingase zifike zihambe ngendlela ezifuna ngayo.
Igumbi elinikezelwe ngokukhethekile izivakashi; livulekile ngokwanele ukuba lihlalise umatilasi womoya omkhulu, uma kudingeka.
Igumbi lokugezela langasese, umbhede omkhulu, i-walk-in closet, indawo yokusebenzela, ifriji elincane, i-microwave, umshini wekhofi we-Keurig, iziteshi ezimbili ze-WiFi, ithelevishini ene-Netflix nokustrima.
4.99 · 359 okushiwo abanye
Sitholakala emphakathini omuhle, othulile, ogxile emndenini, ogxile e-Gilbert, e-Arizona e-Higley naseQueen Creek Road.
Sisondelene nezitolo ezifana ne-Santan Marketplace, i-Gilbert Farmer 's Market, i-Olive Mill, i-Schnepf Farm, nezinye izindawo zokuthenga. Siphinde siseduze ne-Mesa Gateway Airport (amamayela angu-6), i-Sky Harbor (amamayela angu-28), i-Mercy Gilbert Hospital, i-LDS Temple, kanye ne-Gilbert Regional Park ezayo -ipaki elikhulu kunawo wonke e-Gilbert.
Mina nomyeni wami sizotholakala osukwini lonke, mathupha nangocingo. Sizama ukuhlangana nesivakashi ngasinye phakathi nokuhlala kwaso.
UClarizza Ungumbungazi ovelele